နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကြာမြင့်ခဲ့သောပထ ၀ ီမဟာဗျူဟာအမှားများကိုအာဖရိကခေါင်းဆောင်များ - Afrikhepri Fondation
စနေနေ့, 10ပြီ 2021, XNUMX
နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကြာအာဖရိကပထဝီဝင်မဟာဗျူဟာအမှားများ
အဆိုပါသမိုင်းကြောင်းအရဥရောပစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းထူထောင်သောရောမစာချုပ်ကို ၁၉၅၇၊ မတ်လ ၂၅ ရက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သမိုင်းစာအုပ်များတွင်မတွေ့ရသောအချက်မှာဤလက်မှတ်သည် ၁၉၅၇၊ မတ်လ ၂၁ ရက်တွင်စီစဉ်ထားပြီး ၄ ရက်ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သမိုင်းစာအုပ်တွေ (ဥရောပသားတွေရေးတဲ့အားလုံး) ဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုမဖော်ပြထားသော်လည်းအာဖရိကအတွက်တော့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမ်းအနား၌တက်ရောက်ခဲ့သောအချို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှအမှတ်တရများကိုလေ့လာပြီးငှက်ပျောသီးကြောင့်ရက် ၄ ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ အဲဒါကမင်းကိုပြုံးစေနိုင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကအရမ်းလေးနက်တယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာ၏အစဖြစ်ပြီးအခြေခံရည်ရွယ်ချက်မှာကိုလိုနီစီးပွားရေးကိုရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရေး၊ အာဖရိကလွတ်လပ်ရေးထက် ကျော်လွန်၍ ပင်ဖြစ်သည်။ အချို့သောနိုင်ငံများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ငွေကြေးစီးပွါးရေးကိုမည်သို့မည်ပုံကိုလိုနီပြုသည်ကိုသိရှိရန်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန် ၄ ရက်ကြာသည်။ ဖန်တီးမှုအသစ်ပြည်ထောင်စု။ အီတလီတွင် ၁၉၃၂ ခုနှစ်မှစ၍ ကိုလိုနီ၊ ဆိုမာလီယာနှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့မှငှက်ပျောသီးအားနိုင်ငံပိုင်အဖြစ်လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံအားကိုလိုနီ ၅ ခုမှငှက်ပျောသီးများထောက်ပံ့ပေးသည့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှာကင်မရွန်း၊ အိုင်ဗရီကို့စ်၊ မာဒါဂတ်စကာနှင့်မာတီနက်ကာတို့ဖြစ်သည်။ ဂွာတီလူး
ထို့ကြောင့်ငှက်ပျောကိုရောမစာချုပ်အရအာဖရိကနိုင်ငံများအားပထ ၀ ီမဟာဗျူဟာမြောက်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အာဏာပိုင်များကအသိအမှတ်ပြုသည်။ ပြီးတော့ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်မှာပြင်သစ်ကပထမ ၃ နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့တာဝန်ရှိလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကိုလိုနီဟောင်းတွေမှာကျန်နေတဲ့ပြင်သစ်လူ ဦး ရေဟာငှက်ပျောကိုဂရုစိုက်ပြီးဒေသခံတွေဆီ ဦး တည်သွားစေဖို့ဖြစ်တယ်။ အမြတ်အစွန်းနည်းသောဝါဂွမ်း၊ ကော်ဖီနှင့်ကိုကိုးကဲ့သို့သောသီးနှံများ။ ဘယ်လိုကြည့်ရမယ်
ငှက်ပျောသီးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြတ်အများဆုံးအသီးဖြစ်ပြီးအပတ်စဉ်ရိတ်သိမ်းပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံးလေ့ကျင့်နိုင်သည်။ APROVAG ထုတ်လုပ်သူအဖွဲ့အစည်း APROVAG, Senegal ရှိ Tambacounda မှမော်ရိုကိုဖန်လုံအိမ်ရှိတစ်ဟက်တာတွင်တန် ၆၀ အထိရရှိသောကိန်းဂဏန်းများအရဆီနီဂေါရှိအော်ဂဲနစ်ငှက်ပျောသီးတစ်ဟက်တာလျှင် ၂၀ တန်မှအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုသည်တိုးလာကြောင်းသိရသည်။ မော်ရိုကိုရှိ Rabat ၏ Agronomic နှင့်ကုသရေးဌာန Hassan II က။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်တစ်ဟက်တာလျှင် ၃၀၀ ကီလိုဂရမ်လျှင်ကိုကိုးကို CNRA ကထုတ်ယူထားသည့်ကုတ်ဒ်အဗွားနိုင်ငံ၏စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနစင်တာကိန်းဂဏန်းများအရ Lancine Bakayoko က ၁၀/၂၇/၂၀၀၉ တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ - အိုင်ဗရီကို့စ်စီးပွားရေးပညာရှင်များနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများ၏မှားယွင်းစွာရွေးချယ်မှုကြောင့်အတုအယောင်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အိုင်ဗရီကို့စ်ကိုကိုးတောင်သူလယ်သမားသည်မော်ရိုကိုငှက်ပျောသီးလယ်သမားထက်အဆ ၂၀၀ ပိုဆိုးသည်။ ကော်ဖီအတွက်တောင်ပိုဆိုးသည်။ ၁၉၆၉ မှ ၁၉၈၂ ခုနှစ်အတွင်းကော့ဒ်အဗွားနိုင်ငံရှိကော်ဖီနှင့်ကိုကိုးဆိုင်ရာသုတေသနဌာန IRCC မှပြုလုပ်သောအလွန်လေးနက်သောလေ့လာမှုအရ Gagnoa areaရိယာတွင်ပျမ်းမျှပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်ကီလိုလျှင် ၁၈၀ ကီလိုဂရမ်ရရှိခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Ivorian စီးပွားရေးပညာရှင်များနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများသည်တောင်သူလယ်သမားများအား၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်သောမော်ရိုကိုတောင်သူလယ်သမားများထက် ၃၃၃ ဆပိုမိုဆိုးရွားစေပြီးသိသိသာသာလျှော့ချပေးခဲ့သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဆာဟာရသဲကန္တာရတောင်ပိုင်းမှာလည်းအလားတူအခြေအနေမျိုးကိုနေရာတိုင်းလိုလိုမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ငှက်ပျောသီး၏ geostrategy ပါဘူးရှငျ
Le Monde Diplomatique မှ ၁၉၉၆ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင် Ghislain Laporte မှပေးအပ်ခဲ့ပြီး၊ တန်ချိန် ၅၂ သန်းကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် (၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်တန်သန်း ၁၀၀) ။ အဓိကထုတ်လုပ်သူနှစ် ဦး ဖြစ်သောအိန္ဒိယနှင့်တရုတ်တို့သည်သူတို့၏ထုတ်လုပ်မှုအားလုံးကိုသုံးစွဲခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင်တန်ချိန် ၁၁ သန်းကျန်ရှိနေသည့်အနက် ၄ သန်းမှာဥရောပသမဂ္ဂသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၂/၃ ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်သော United Brands Company (Chiquita brand) နှင့် Castel & Cooke (Dole တံဆိပ်) နှင့်မက္ကဆီကန် - Del Monte ကထိန်းချုပ်သည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ရာများမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ၁- ACP (အာဖရိက၊ ကာရစ်ဘီယံနှင့်ပစိဖိတ်) ဟုလူသိများသောနိုင်ငံပေါင်း ၇၉ ခုလုံးသည်ဥရောပ၊ အလွန်သေးငယ်သောစပိန်ကရေရီကျွန်းစု (တန်ချိန် ၄၂၀,၀၀၀) ၏နှစ်ဆ (၈၅၇၀၀၀ တန်) မျှသာဖြစ်သည်။ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ နှင့် ၂၂၀,၀၀၀ တန်ကိုယူရို ၃၈၂,၀၀၀ နှင့်အတူဥရောပသမဂ္ဂကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည့် ၃၈၂,၀၀၀ ရှိသည့်သေးငယ်သော Martinique ထက် ၄ ဆမျှမျှသာပိုများသည်။ ဆာဟာရတောင်ပိုင်းအာဖရိက ၈၀၂ သန်း (၂၀၀၇ တွင်ဖော်ပြထားသည်) ။
2- ပိုဆိုးတာက 79 ACP ၏ပမာဏတူညီစည်းဝေးကြီးများသို့မဟုတ် 2,5 သန်းတန်ချိန်ပျော်မွေ့မတောင်အမေရိကတို့ကအီးယူမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏အရေအတွက်၏တတိယဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာကြောင်း (တောင်အာဖရိကအနောက်လွတ်လပ်ရေးနေဖြင့်အသိအမှတ်ပြု၏2နှစ်ပေါင်းကျော်) သင့်ပါတယ်ဒီအဖြစ်သက်သက်သာကိုလိုနီခေတ်ယုတ္တိဗေဒငှက်ပျောနဲ့တူအာဖရိကအမြတ်အစွန်းဘဏ်ဍာကိုဖွင့်ဖို့စိတ်အားထက်သန်ဤ 50 point ကနေပေါ်ထွက်လာသီးသန့်ဖယ်ထား သာအနောက်နိုင်ငံမှအာဖရိကမြေဆီလွှာပေါ်တွင်ထုတ်လုပ်မှု, ။
အာဖရိကခေါင်းဆောင်များ၏အမှားသူယုံကြည်, ဥရောပသမဂ္ဂထဲကနေလာလိမ့်မယ်နှင့်တစ်ဦးစုစုပေါင်းကလိုက်လျောညီထွေမှုလိုကွောငျးတစျခုထက်ကမ္ဘာကြီးကိုရန်နောက်ထပ်အမှန်တရားရှိကွောငျးယုံကြည်ဖို့ဒီကိုလိုနီခေတ်ယုတ္တိဗေဒနေခဲ့ n ' သောအီးယူဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကလိုက်လျောညီထွေ anesthetize မှမဟုတ်သောအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (NGO) ကအာဖရိကသစ်တောချွေတာ၏အရေးတကြီးမွှမ်းတင်ကြရသောဂေဟစနစ်ဆိုသညျကားရောက်ရှိလာခဲ့ပေမယ့်ဘယ်သူ၏စစ်မှန်သောအခန်းကဏ္ဍဒီအာကာသ၏စစ်ဆင်ရေးကနေအာဖရိကန်အာရုံဖို့ဖြစ်တယ် မရေမတွက်နိုင်သောဘဏ်ဍာငှက်ပျောစိုက်ခင်းများ၏ဖန်တီးမှုဖို့အရေးကြီးတယ်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှာအပေါ်ငှက်ပျောသီး၏အလွန်အကျိုးအမြတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှောက်ယှက်နှင့်အာဖရိက၏စစ်မှန်သောဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ရေးသေချာနိုင်ဘူး။ ငှက်ပျော၏ဤဥပမာကိုတင်သွင်းခံရဖို့ငှက်ပျောသီး၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြည်တွင်းရေးထုတ်လုပ်မှုလျစ်လျူရှုကြသူဆီနီဂေါကဲ့သို့ဆန့်ကျင်နိုင်ငံများသို့ဖြစ်ပျက်သောဤအခြေအနေကအရမ်းလက်ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
ပိုတက်ဆီယမ်ကိုကြွယ်ဝစွာဖြင့်ငှက်ပျောသီးသည်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာသည့်ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအစာအိမ်အနာ၊ ၀ မ်းလျှောခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောသဘာဝဆေးရည်ဟုလည်းခေါ်သည်။ သံဖြင့်ကြွယ်ဝသောငှက်ပျောသီးသည်သွေးအားနည်းရောဂါကိုသက်သာစေသည့်ဟီမိုဂလိုဗင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ငှက်ပျောသီးတွင်ဗီတာမင် B6 ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်သွေးအတွင်းရှိဂလူးကို့စ်ကိုထိန်းညှိရန်ဖြစ်သည်။
တောင်မှတင်ပို့မှုကနေမယ်ဆိုရင်လျှက်အောင်ဒီအသီးက၎င်း၏အဆင့်မြင့်ဗီတာမင် C အကြောင်းအရာနှင့်တဦးတည်းကိုလက်ညှိုးတစ်ရိက္ခာသောကွောငျ့, အာဖရိကငှက်ပျောစားသုံးသူများကျယ်ပြန့်ပြည်တွင်းရေးပန်းကန်ဖွံ့ဖြိုးသင့်တယ် ငှက်ပျောတစ်နေ့ကအာဖရိကန်သားသမီးများ၏ဗီတာမင် C ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းရန်လုံလောက်သောပါလိမ့်မယ်။ နှင့်ကလေးလူဦးရေ၏မြင့်မှုနှုန်းနှင့်ဗီတာမင်လိုအပ်ချက်များ၏အလှူငွေဘို့အာဖရိကသူ့ဟာသူအတွက်ကြီးမားတဲ့ကြီးမားသောစျေးကွက်လည်းမရှိ။
55.000 အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရောင်းချခဲ့ငှက်ပျောသီး၏ 2010 တန်ချိန်ခုနှစ်, 40% အာရှ, 27 တောင်အမေရိကရှိ% နှင့်အာဖရိကတွင်သာ 13% ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ အဲဒီမှာကငှက်ပျောသီးအချိုပွဲဟုခေါ်သောအသီး, မှည့်သောငှက်ပျောသီးအဖြစ်ကိုစားငှက်ပျောသီးပြောသည်။ ဒါပေမယ့် FAO မှပေးကိန်းဂဏန်းများအရသိရသည် 1995 အတွက်ငှက်ပျောသီးစိမ်းချက်ပြုတ်လောကီသားတို့သည်အ 24.000 တန်ချိန်ထုတ်လုပ်ခဲ့တောင်အမေရိကအတွက် 17.000 နှင့် 71% တန်ချိန်ပြောဖြစ်တယ်, 4.000 တန်ချိန်အာဖရိကမှာထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်ဟုပြောသည် ကြောင်း 17% ဟုပြောရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ကြောင်းကတည်းကအနောက်၏စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်အာဖရိကန်ကမ္ဘာကြီးငှက်ပျောသီး၏ 13% ထုတ်လုပ်ရန်ဘူးလျှင်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မသန်စွမ်းမှုမဖွင့်ကြောင်းကောက်ချက်ချပေမယ့်သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်လျောညီထွေနေလို့ရပါတယ် ကစာချုပ်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်လျက်ရှိ၏ ဒါကြောင့်တစ်ဦးရှင်သန်မှုဗီဇဖြည့်ဆည်းရန်ကြွလာသောအခါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်, ကစားစရာဘို့ထုတ်လုပ်ရန်မှကြွလာသောအခါကတည်းက, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့စံချိန်ရိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာဖရိကန်၏ဦးနှောက်ကဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပမှာရောင်းချဘို့, ရောင်းရန်ရှိသည်ထုတ်လုပ်ရန်မှကြွလာသောအခါအိပ်ဟန်ကြောင်းပြောနိုင်ပါသည်။ က installed အနောက်တိုင်းကုမ္ပဏီတွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာအပြည့်အဝဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လျှင်သူတို့ကဥရောပသမဂ္ဂ lavishes ကြောင်းပါးနမမှန်ကန်ကြောင်းအကြံပေးခြင်း, သောစိတ်ဓာတ်စျေးကွက်များအတွက်ငှက်ပျောသီးထုတ်လုပ်ရန်ပြောဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှထို့နောက်များမှာ အာဖရိကမှာ။
2007 မှာတော့ငှက်ပျောသီး၏ 65% ကိုငှက်ပျောသွားယခင်ကကော်ဖီနှင့်ကော်ဖီအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးဖျက်ဆီးခံရလယ်ကွင်းရှိသည်သောသူချန်ပီယံဖြစ်ကြောင်းနှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်ရောင်းချနှင့်ဗြိတိသျှဖြစ်ပါတယ် ကော့စတာရီ။ ဆိုလိုသည်မှာထိုနှစ်တွင်ပင် 10 ကမ္ဘာကြီးကိုနိုင်ငံများတွင်ငှက်ပျောသီး၏အကြီးမားဆုံးပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များကိုဖန်ဆင်းသောအရာကိုရဲ့7ဤဒေသတွင်တင်ပို့သည့်ငှက်ပျောသီး၏ 95% ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုခြင်း, တောင်အမေရိကမှခဲ့ကြသည် ကမ္ဘာကြီးကို။ ဤအတောအတွင်းအာဖရိကန်လွတ်လပ်ရေး၏ 50 နှစ်ပေါင်းဆင်နွှဲဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ကြပေမယ့်နေဆဲ, ကိုလိုနီခေတ် command ကိုလက်ကိုင်သာကော်ဖီ, ကိုကိုးနှင့်ဝါဂွမ်း၏အခြားနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားထုတ်ကုန်-ဆက်စပ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့တဲ့ဒုက္ခခဲ့4ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကာလအတွင်းအမေရိကတိုက်မှအာဖရိက၏ယခုကဲ့သို့ဖမ်းဆီးမှုများ။
၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင်မော်ရိုကိုသည်ငှက်ပျောသီးတင်သွင်းခြင်းကိုပိတ်ပင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဘုရင့်အနေဖြင့်ငှက်ပျောကိုနိုင်ငံတော်လက်တွင်းရှိပထဝီအနေအထားဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ခဲ့သည်။ ဘုရင် (ကွန်ဂိုနှင့်ကင်မရွန်းနှင့်မတူဘဲ) ကဲ့သို့သောရာသီဥတုဆိုးရွားသည့်အခြေအနေများရှိသော်လည်းဘုရင်ကနိုင်ငံသားများအားစျေးနှုန်းချိုသာစွာငှားရမ်းထားသော ၁.၅၃ ဟက်တာခွဲများဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောအသင့်ရှိသည့်ဖန်လုံအိမ်များကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင်နှစ်စဉ်ငှက်ပျောသီးတန်ချိန် ၂၄၀၀၀ တင်သွင်းသောမော်ရိုကိုသည် ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှစ၍ ပိတ်ပင်မှုမတိုင်မီအဆင့်တွင်ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ပါမောက္ခ ၃ ဦး ဖြစ်သော Skiredj၊ Walali နှင့် Rabat မှစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ကုသရေးဌာန Hassan II မှ Attir တို့သည် ၁၉၈၀/၈၁ လှုပ်ရှားမှုအစတွင် ၂ ဟက်တာမှ ၂.၆၀၀ ဟက်တာသို့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ၃,၅၀၀ ဟက်တာသို့သွားခဲ့သည် နှစ်စဉ်ငှက်ပျောသီးတန် ၁၀၀၀၀၀ ကျော်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်
အဆိုပါပေါ်လစီသည်ချဉ်းကပ်အစွန်းရောက်များနှင့်3လမ်းညွန်ဖြစ်ရမည်:
အာဖရိကအတွက်ထုတ်လုပ်ငှက်ပျောသီး၏ 1- 40% အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်၏မရှိခြင်းများအတွက် rots ။ ဒီကုစားဖို့ကျနော်တို့မော်ရိုကိုအတွက်ပြုသကဲ့သို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လှုံ့ဆော်နှင့်ပြည်တွင်းဈေးကွက်စနစ်တကျသက်ဆိုင်ရာပမာဏသာရှိ ripened ပေါ်ထွက်လာရသော ripening ငှက်ပျောသီးထဲမှာစောင့်ရှောက်ဖို့အသေးစားထုတ်လုပ်သူများအားလုံးကိုအချိုပွဲငှက်ပျောသီးရရှိနိုင်စုဆောင်းစည်းရုံး ပြည်တွင်းရေးစျေးကွက်၏တောင်းဆိုချက်မှာ။
သေးငယ်တဲ့စိုက်ခင်းမြေကွက်အတွက်ငှက်ပျောသီးထုတ်လုပ်မှုဒီမိုကရေစီအသုံးပြု 2- ။ ဤသည်အာဖရိကတိုက်ရှိပေမယ့်လည်းငှက်ပျောစိုက်ပျိုးခြင်းခိုင်မြဲစွာသည်အဘယ်မှာရှိမာတီနစ်နှင့် Guadeloupe ထဲမှာမသာနေဆဲယနေ့လေ့လာတွေ့ရှိသည်ဟုကျွန်အဖြစ်ငှက်ပျောစိုက်ခင်းများ၏ကိုလိုနီအလေ့အကျင့်များနှင့်ချိုးဖျက်ဖို့တစ်ခုတည်းသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ် သီးသန့်ဟောင်းတဦးကျွန်သားစဉ်မြေးဆက်တို့လက်၌တည်၏။
ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် 3-, သင်ရောင်းဖို့ရှိသည်။ အဆိုပါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းစျေးကွက်ကစားစရာတစ်ဦးချင်းစီထုတ်ကုန်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီယဉ်ကျေးမှုအဘို့, တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းပြည်တိကျတဲ့ယုတ္တိဗေဒနှင့်တွေ့ဆုံရန်အဖြစ်။ သင်တို့သည်ဤလောက၏ဥရောပနိုင်ငံများတွင်4ဖို့ကန့်သတ်မဟုတျကွောငျးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်စိတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိရန်ရှိသည်, ထိုသူတို့ချမ်းသာကြွယ်ဝစေသတည်း။ ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ရုရှား, အီရန်, တူရကီအဖြစ်နိုင်ငံအများအပြားအတွက်ငှက်ပျောသီး၏စားသုံးမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်အလွန်မြင့်ရဲ့ margin ရှိပါတယ် ...
သိမ်းယူရန်အာဖရိကပြည်တွင်းစျေးကွက်တစ်ခုရှိသော်လည်း၎င်းကိုရရှိရန်၎င်းကိုစိတ်ကျေနပ်စေရန်ထုတ်လုပ်ရန်လိုသည်။ ငှက်ပျောသီးကဏ္multတွင်နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများ၏ထောင်ချောက်ကိုရှောင်ရှားရန်အတွက် ၅ ဟက်တာထက်မပိုသောသေးငယ်သည့်မြေကွက်များဖြင့်ငှက်ပျောသီးလုပ်ငန်းကိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးရန်လိုအပ်သည်။ ပိုင်ရှင်များသည်ပိုင်ရှင်များသည်နေ့စဉ်လုပ်ကိုင်နေသူများဖြစ်ကြောင်းသေချာစေပါ ဒီစိုက်ခင်း။ ၎င်းသည်ကော့ဗ်တီဗီအတွက်အထူးသဖြင့်ကော့တ်အိုင်ဗွီကဲ့သို့ဒေသခံများသည်သူတို့၏လက်များကိုပွတ်သပ်။ အခြားနေရာများမှကျွန်များကိုစေခိုင်းသည့်အချို့သောနိုင်ငံများတွင်တွေ့ရသောစိတ်ပျက်ဖွယ်ရာမြေယာပြproblemနာကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သမဝါယမအသင်းသည်စီမံကိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောတောင်သူလယ်သမားများကိုသာအမှန်တကယ်စည်းလုံးစေရမည်။ ထို့ကြောင့်သူမပထမ ဦး ဆုံးငှက်ပျောသီးအပင်များကိုတောင်သူများအားပေးအပ်ရန်မှာတာ ၀ န်ရှိသည်။ သို့ဖြစ်လျှင်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများကိုလိုက်နာရန်၊ အမျိုးသားစျေးကွက်နှင့်နိုင်ငံတကာကိုလွှမ်းခြုံရန်တာဝန်ယူရမည်။
ယနေ့ငှက်ပျောသီး၏စစ်မှန်သောအကျိုးကျေးဇူးဖြန့်ဖြူးတည်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်အကောင့်သို့တစ်ဦးစီကိုမြဲမြံစေနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အဓိကမြို့ကြီးများတွင်တိုက်ရိုက် ripening ဖန်တီးရန်လိုအပ်ကြောင်းယူမပါဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမျှမကသောမူဝါဒဆင်းရဲမွဲတေမှုကော်ဖီ, ကိုကိုးနှင့်ဝါဂွမ်းမှထွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လယ်သမားများအတွက်ပြည့်စုံပြီးထိရောက်မှုရှိလိမ့်မည် အာရုံစူးစိုက်မှု "ဒေါင်လိုက်" ဟုပြောသည်။ ဒီစျေးနှုန်းမှာရှည်လွန်းဥရောပတိုက်သားများကအာဖရိကတိုက်ကြီးများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမွေးကင်းစကလေးများ၏ယုတ္တိဗေဒအတွက်ကျန်ရစ်အာဖရိကငှက်ပျော၏ယှဉ်ပြိုင်မှုမရှိခြင်းအချို့အားနည်းချက်များကိုကျော်လွှားရန်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တည်ဆဲငှက်ပျောသီးလယ်ကွင်း၏ကိုလိုနီယုတ္တိဗေဒကိုရပ်တန့်ရန်, ဤငယ်များမှတစ်ဦးအကူးအပြောင်းကိုရောက်ရှိနှင့်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ကုမ္ပဏီများကတိုက်ရိုက်ထုတ်ယူကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအကြှနျုပျတို့ကမ်ဘာပျေါမှာငှက်ပျောအများဆုံးစားသုံးသီးသောအသီး၏အကျိုးကျေးဇူးများတစ်ဦးကိုမှန်ကန်ပြန်လည်ခွဲဝေမှုအောင်မြင်လိမ့်မည်ဟုစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ပြီးသားအာဖရိကနှင့်မတူဘဲအစိုးရများသူတို့ကိုယ်သူတို့ထုတ်လုပ်ရပ်တန့်နှင့်လယ်သမားများထံသို့တိုက်ရိုက်ငှက်ပျောသီးဟာသူတို့ရဲ့သေတ္တာများဝယ်ယူရန်စက်မှုလုပ်ငန်းနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများအတွက်လိုအပ်မှညှိနှိုင်းခဲ့ကြဘယ်မှာအများအပြားအမေရိကန်တောင်ပိုင်းနိုင်ငံများတွင်ဖြစ်ပျက်နေသည်ကားအဘယ်သို့ ။
Missirah ဆီနီဂေါ၏ခရိုင်အတွင်းရှိ APROVAG သမဝါယမ (ထုတ်လုပ်သူအဖွဲ့အစည်း Tambacounda) ၏ဥပမာ, ထောက်ပြခြင်းနှင့်အခြားနေရာများတွင်အာဖရိကမှာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပုံရသည်။ သူတို့အဘို့အသီးအသီးစိုက်ပျိုး၏ဟက်တာ 16 0,25 ပြောဖြစ်တယ်, တို့ပြည်ငှက်ပျောသီး 1,63% ရည်စူးနိုင်ရန်အတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုစည်းရုံး
ပိုက်ဆံအဘို့အကြီးထွားလာငှက်ပျောသီးမှမြှုပ်နှံဟက်တာ 250 စုစုပေါင်း။ 2008 မှာတော့ထုတ်လုပ်မှု (လယ်သမားသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်စားသုံး% ripening နှင့် 5.000 မရှိခြင်းကြောင့် 20% တစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်အတူ)5တန်ချိန်ခဲ့သမဝါယမသေးငယ်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုသဘောပေါက်, ငှက်ပျောသီး၏ 4.000 တန်ချိန်ရောင်းချပြီ 640.000.000 Missirah, Dialacoto နှင့် Netteboulou: ကျေးလက်ဒေသလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း 975 အတွက်ဟက်တာနှုန်း 760 52 845 CFA: နီးပါး 1 561 မြို့သားတို့ကိုမှာခန့်မှန်းခြေကဒီရွာကလူဦးရေနှင့်အသားတင်အမြတ် margin များအတွက် CFA (€ 000 3) ။ ဤသည်သမဝါယမဒါခေါ်စက်မှုငှက်ပျောစိုက်ခင်းအတွက်မပျော်ရွှင်၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သောဓာတုဓာတ်မြေသြဇာစွန့်လွှတ်ကြသူဟက်တာနှုန်းက၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှု 20 တန်ချိန်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များ၏ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်, ကန့်သတ်အပြစ်ပေးခံရခြင်းမှရှေးခယျြခဲ့သညျ။
ငှက်ပျောသီးသည် climacteric fruit ဟုခေါ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်မှည့်ထွက်သောထုတ်ကုန်များ၏ထုတ်ကုန်များဖြစ်သော acetylene (သို့) Ethylene ကြောင့်၊ ရေနံဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, ဓာတ်ငွေ့မှရရှိသော။ အသေးစားထုတ်လုပ်သူများထံမှကောက်ယူထားသောငှက်ပျောသီးကို“ မှည့်သောအခန်းများ” ဟုခေါ်သောအအေးခန်းများ၌ချက်ချင်းသိမ်းဆည်းရမည်။ ထိုတွင်သူတို့သည်လေးရက်အတွင်း ၁၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၁၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိသိုလှောင်ရန်သိုလှောင်ရန် ၆-၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်တည်ငြိမ်သောအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆတို့တွင်အက်စီတလင်းကိုကုသကြသည်။
, G ACP-အီးယူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလိုအပ်သောကိုလိုနီခေတ်အရသာ
50 နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာအာဖရိကနိုင်ငံများ၏လွတ်လပ်ရေး၏အီးယူအားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုပြီးနောက်, ဒီထိရောက်သောလွတ်လပ်ရေးလုပ်ဖို့အချိန်ဖြစ်နိုင်ပါသည်ရောက်လာတယ်။ ယနေ့တွင် 46 အာဖရိကနိုင်ငံများ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်အောက်ငယ်သားတစ်ဦးအခွအေနေ၌ရှိကြ၏အနိုင်နိုင်ငှက်ပျော၏ဥပမာနှင့်အတူရှင်းလင်းသောတင်ကြ၏။ အာဖရိကတဖက်သတ်တစ်အစွန်းရောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ယူသည်သူ၏ဆယ်ကျော်သက်ထဲကရဖို့သတ္တိရှိရမည်ကြောင့်သူမထိန်းချုပ်မှုအဘို့အယက်ခဲ့သမျှသောလှည့်ကွက်အဆုံးသတ်ကြောင်းဥရောပသမဂ္ဂအကြောင်းကြားနှင့်ကျွန်စနစ်အတွက်ကျင်းပရန် ။ ဆုံးလောက၏ဥပမာ ACP (အာဖရိကကာရစ်ဘီယန်နှင့်ပစိဖိတ်) လို့ခေါ်တဲ့နာမည်ကျော်အာဆီယံကိုလိုနီစနစ်ချောဘယ်တော့မှကြောင်းကိုသက်သေပြနထေိုငျနှင့်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်:
ယင်း၏ဖန်ဆင်းခြင်း၏ပဏာမခြေလှမ်းကိုယူကြသူ 1- မအာဖရိကန်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောအာဆီယံဥရောပများ၏သီးသန့်အကျိုးစီးပွားနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဥရောပတိုက်သားများကယူဆနိုင်ဆိုလိုသည်။ သာသူတို့အာဖရိက၏အကျိုးစီးပွားများအတွက်ပြုယူဆ ပို. ပင်စော်ကားသည်ဤများ၏ထောက်လှမ်းရေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုခုကိုကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အာဖရိက၏ပုံရိပ်ကိုနှမျးအတွက်လုံးဝထွက်လာပါတယ်။
2- ဒါဟာ 46 SSA အားနိုင်ငံပေါင်းဥရောပသမဂ္ဂအားလုံးမသက်ဆိုင်စည်းလုံးထားပြီးသော်လည်း, မြောက်အာဖရိက၏နိုင်ငံများတွင်ဖယ်ထုတ်ပြီး, ဥရောပသမဂ္ဂနှင့်အတူမည်သည့်ဆွေးနွေးမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ပါသည် ဘာပဲတည်နေရာကိုအငြင်းအခုန်၏ဆောင်ပုဒ်။
ဘရပ်ဆဲလ်၌တကြ် CPA ရဲ့ဌာနချုပ် 3- နှင့်အတူတူပင်သင်္ကေတ၏စည်းကမ်းချက်များ၌လုံးဝလက်မခံနိုင်သောဥရောပသမဂ္ဂတို့ကငွေကြေးထောက်ပံ့%, 100 ရန်, 50 နှစ်အတွင်းများအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုလွတ်လပ်သောယုံကြည်နိုင်ငံများအတွက် ။ ဒီ ACP နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုလျှင်, ဘယ်လိုထို့နောက်ထိုင်ခုံကိုဤဥပဒေရေးရာ entity ၏အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများထဲကတစ်ခုထဲမှာမကြောင်းကိုရှင်းပြဖို့? ၎င်း၏အကျိုးစီးပွားဥရောပသမဂ္ဂ၏သူတို့နှင့်အတူကွဲပြားသောအခါဘာဖြစ်ပျက်သလဲ? သမ္မာတရားကိုခါးကအဖွဲ့အစည်းကိုဒီလိုမျိုးအဘို့အတိုးဝှေ့ပွေးဟာအာဖရိကန်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပြီး, စိတ်ရင်းမှန်နဲ့သူတို့ကိုတီထွင်ဖို့အတှကျပျြောရှငျမှုတည်ဆောက်ရန်ဆန်းသစ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုဖန်တီးရန်, အလုပ်လုပ်နိုင်ရင်တော့မှားမယ်ယုံကြည် သူတို့ရဲ့လူဦးရေ၏စည်းစိမ်ချမ်းသာ။ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာသျောနှင့်တိုက်ကျွေးသည့်အခါသူကခံစားရဘယ်အရာကိုဂုဏ်သိက္ခာအာဖရိကအရာရှိတဦးက? ဤသည်အာဖရိကန်လူမျိုးတို့၏အသိဉာဏ်ပြည့်တန်ဆာတစ်ဦးစစ်မှန်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
4- 1973, United Kingdom နှစ်နှစ်အကြာတွင်ဥရောပသမဂ္ဂပူးပေါင်းတဲ့အခါ, 1975 ထဲမှာ, ACP ၏အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏နံပါတ်တစ်အံ့ဖွယ်တိုးလည်းမရှိ။ ဒီအသေးငယ်တဲ့အံ့ဖွယ်ဗြိတိန်သည်သူ၏ကျော်ကြားသော "ဓနသဟာယ" ၏ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့ဝင်များကကိုလိုနီဆောင်ခဲ့တော်မူပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတကြ် CPA တစ်ဦးကိုလိုနီခေတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အနိုင်ငံများက၎င်း၏ဖန်တီးသူ၏ဦးခေါင်း၌နေသောလိုက်နာသောကွောငျ့လညျးမကပိုမဟုတ်သလိုလျော့နည်းသည့်အခြေချနေထိုင်ထက်, တစ်ဦးသက်သက်သာကိုလိုနီခေတ်ယုတ္တိဗေဒအတွက်လည်ပတ်ကြောင်းသက်သေဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်အာဖရိကပိုကောင်းသွားလာရင်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးအချိုပွဲနီးပါး52011 40 တန်ချိန်အတူငှက်ပျောသီး၏ 5% ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတင်ပို့, 000 အတွက်ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမဟုတ်သူ 000- အီကွေဒေါ။ ဒီစျေးကွက်၏သူတို့ရဲ့နီးပါးစုစုပေါင်းဖျက်သိမ်းရေးအတွက်သူ၏စွပ်စွဲ protected တကြ် CPA နှစ်သိမ့်စေခြင်းငှါ, ဥရောပသမဂ္ဂ 79 နေဖြင့်ရှယ်ယာအားပေးတော်မူပြီ အသီးအသီးသန်း 220 ပျမ်းမျှပြောကြောင်း ACP စွပ်အိတ် 2,70 သန်း။ အဘယျသို့နည်း မည်သည့်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်သလော နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ။
ကောင်းစွာတဦးတည်းနှင့်အတူပြောတတ်တဲ့ပါတီတစ်ခုမညီမျှမှုဆက်ဆံရေးအတွက် install လုပ်ပြီးသောကမ်ဘာပျေါတှငျက၎င်း၏တောင်ပိုင်းမိတ်ဖက်အားကောင်းလာစေရန်နှင့်အားနည်းသွားစေရန်ရည်ရွယ်ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၏ဒေသ၏မဟာဗျူဟာ ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်နှင့်၎င်း၏သီးသန့်အကျိုးစီးပွား, အ ACP အုပ်စုတစ်စုအဖြစ်အနည်းငယ်သာတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအဖြစ်မိတ်ဖက်အဆိုအရပုံစံအားဖြင့်အသံနှင့်ရွေးချယ်ပါတယ်။ အာဖရိကကြောင်းလွတ်လပ်ခွင့်မှသူတို့ကိုယ်သူတို့ emancipate ရန်, အတိတ်နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးများအတွက်အရေးပါသောအလိုအပ်ချက်တစ်ခုအစစ်အမှန်အသိတရားမရှိဘဲကျွန်ပြုမှုနှင့်ကိုလိုနီခေတ်အကြမ်းဖက်မှုရာစုနှစ်များစွာထဲကမလာပါဘူးနားလည်ရပေမည်။ အဘယ်သူ၏သာရည်မှန်းချက်အာဖရိကန်ကိုဝေနှင့်အာဖရိက၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုတားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလက်မှုပညာ, ACP သို့မဟုတ် CEMAC ဟုခေါ်ကြသည်သောသူအပေါင်းတို့ပွငျ, ECOWAS သို့မဟုတ်နေကြသည်အတု configurations
အာဖရိကလူငယ်အရေးပါသောမေးခွန်းကိုမေးမြန်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်: အရှိဆုံးမိုအုပ်စုတွင်အဘယ်ကြောင့်အီးယူအာဖရိကတိုက်ကြီး fragmenting ဟောင်းတဦးကွန်မြူနစ်နိုင်ငံများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်ဥပမာကိုယ်နှိုက်မှဤအကြံပြုချက်များလျှောက်ထားပါဘူး ဥရောပသမဂ္ဂ, အီးယူဥရောပသမဂ္ဂ, အီးယူ၏အတ္တလန္တိတ်နိုင်ငံတွေတစ်ဦးအုပ်စုဖွဲ့ဖို့မြေထဲပင်လယ်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နိုင်ငံများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များတည်ထောင်သူ6၏အုပ်စုတစု ??? အနောက်နိုင်ငံတွေမှာစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကြွယ်ဝတဲ့လူတွေကကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားနှင့်ဤအသိအမြင်ဆင်းရဲသားတခြားသူတွေရဲ့အသိအမြင်ထဲမှာရှိပါတယ်, အကြွင်းမဲ့အာဏာ, ကြွယ်ဝသောမဟုတ်သလိုဆင်းရဲသောသူတို့သည်မနိုင်ငံများတွင်ရောနှောရှိကွောငျးကိုအပြသထားတယ်။ အာဖရိကတိုက်ကြီးများ၏ရန်သူမဟုတ်, ဥရောပသမဂ္ဂကအာဖရိကဆင်းရဲသား proxy ကပြုမူခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဥရောပအမျိုးသားရေးဘောလုံးအသင်းများကိုကြည့်ဖို့ကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းအရာလက်အောက်ငယ်သားကဒီစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ် ဒီအာဖရိက lotto ၏ဆုရှင်သုညမန်နေဂျာ Qu စသည်တို့ထံမှ၎င်း၏စွမ်းရည်သက်သေပြဘယ်တော့မှထားပြီးဖြစ်သော်လည်းသူသည်အကြီးဆုံးအများပိုင်ကုမ္ပဏီများသည် directing, သူ့နည်းပြစွမ်းရည်များအတွက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုပြဖူးလျှင်ပင် ... ငှက်ပျောသူတို့တင်သွင်းမေ့နိုင်ငံများတွင် 180 ၏ပြန်လာပြီးအတူကျွန်အဖြစ်ကော်ဖီနှင့်ကိုကိုး၌စှဲမွဲကြောင့်တရားမျှတနိုင်သလဲဆိုတာကိုတစ်ကီလိုဟက်တာဖြစ်တယ်, ဒါသူတို့ပင်ငှက်ပျောဒီအောင်မြင်ရန်နိုင် ဟက်တာနှုန်းနိမ့်ဆုံးအမြတ်အစွန်း 20 တန်ချိန်? ဥရောပထိုသို့ပြုမှလက်ျာဘက်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောသည်လျှင်မည်သို့ပင်, ဟုတ်တယ်, အတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်သူပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ မိမိအဘိုးဘွားသတ္တုတွင်းအပေါ်အသာစီးခဲ့စဉ်ကတည်းကအဘယျကွောငျ့, မဟုတ်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်; ပင်မိမိဘုရားငါ့ဘိုးဘေးခဲ့ကြသည်သောဘုရားကိုကျော်ယူထားပြီးကတည်းက; မိမိအဂျုံမုန့်ကိုငါ့ဒိုးနတ်ပြောင်းဆန်, sorghum, ပီလောပီနံကိုအစားထိုးထားပါတယ်ကတည်းက; ၎င်းတို့၏အမည်များကိုမိုင်းနဲ့အစားထိုးခဲ့ကြစဉ်ကတည်းက; ယင်း၏ဘာသာစကားသတ္တုတွင်းအစားထိုးကြောင့်၎င်း, ယင်း၏ငွေကြေးသတ္တုတွင်းအစားထိုးထားပါတယ်ကြောင့်၎င်း, ၎င်း၏သမ္မတသတ္တုတွင်းဦးသေဆုံးခဲ့ကြစဉ်ကတည်းက; သူသည်ငါ့ကိုအဘို့အကြှနျုပျ၏အမျိုးသားရေးအသင်း၏ကစားသမားများရွေးချယ်သောအခါအဘယ်ကြောင့်မမှားယွင်းမည်မဟုတ်လော ကမ္ဘာကြီးကိုငါ့အခြုံမှလာသည်ဟုအောက်စီဂျင်မရှိခြင်းကနေ suffocates စိုးရိမ်. ငါ, ငါ့စိုက်ခင်းဖန်တီးရန်သစ်တောမထိရမည်ဟုငါ့အဘို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းခုနှစ်တွင်? သူဟာသေချာပေါက်ကိုကိုးများ၏တန်ရာဝါကြွားခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်, ပဲရစ်တွင်သို့မဟုတ်ဗီယင်နာရှိအခြို့ဇိမ်ခံချောကလက်၏ဘုန်းအသရေမှ၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှု၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှည်ဖို့ကျွန်မကိုအကြံပေး။ အရာအားလုံးနှင့် ပတ်သက်. သေချာပေါက်ပိုင်ခွင့်ကိုသူ။ ဒါကြောင့်မပါလျှင်, ငါတကယ်ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်းကို?
Jean-Paul Pougala သည်ကင်မရွန်းနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိဂျီနီဗာလေ့လာရေးဌာန၏ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်
Watch United States of Africa (၂၀၁၂)
သင်တန်းတက်နေစဉ် - ဝိန်းဒိုင်ယာ (အသံ)